Linux ရှိ Firmware နှင့် Driver: ဤအယူအဆ (၂) ခုနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်မျှသာ Linux မှ
Firmware and Driver Linux - ဒီသဘောတရား ၂ ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာအားလုံး
Linux Post Install လုပ်ပါ | | အကြံပြုပါသည်, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်အယူအဆများ၏ဘာသာရပ်ကိုဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ် « Firmware »နှင့်« Driver »သူတို့ကတိုက်ရိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့က2အရေးကြီးသောအယူအဆများဖြစ်ကြကတည်းက ချောမွေ့သောစစ်ဆင်ရေး အရာအားလုံး operating system တစ်ဦး စက်ကို စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထား။
ပြီးတော့ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်မလဲဆိုတာကိုအနည်းငယ်လေ့လာပါမယ် « Firmwares »နှင့်« Drivers » အပေါ် GNU / Linux များ.
ဒီ post မှာတော့ဘာအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုငါတို့သွားမှာမဟုတ်ဘူး command ကိုပညတ်တော်တို့ကို အသုံးဝင်သောသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြသည် ကွန်ပျူတာ၏စက်ပစ္စည်းနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲများ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုသိရှိထားရမည်ခါတိုင်းလိုအဖြစ်ကျနော်တို့အချို့၏လင့်များထားခဲ့ပါလိမ့်မယ် သက်ဆိုင်သောယခင်ပို့စ်များ ဒီတော့လိုအပ်ရင်ဘယ်သူမဆိုအလွယ်တကူ ၀ င်ရောက်ပြီးအဲဒီအချက်ကိုနက်ရှိုင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။
ကွန်ပျူတာပစ္စည်းတစ်ခုသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဟာ့ဒ်ဝဲဟုခေါ်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာများနှင့်ဆော့ဝဲဟုခေါ်သောယုတ္တိဗေဒဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုစလုံးကိုခွဲခြားသိမြင်စေသည့်ကိရိယာများသည်ပစ္စည်းကိရိယာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုသိရှိရန်နှင့်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သောဆုံးရှုံးမှုများကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ Firmware (သို့) driver ကို install လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ် update လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီမှုတောင်းခံရန်လိုအပ်လာသောအခါ၎င်းသည်ပါ ၀ င်သော hardware နှင့် software နှင့်ပတ်သက်သည့်ဖြစ်နိုင်သမျှနှင့်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်အရေးကြီးသည်။ ပစ္စည်းကိရိယာများ။ စနစ်ကိုသိရန်အမိန့်များ (ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အချို့သောဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွဲ့စည်းမှုများကိုဖော်ထုတ်ပါ)
သင့် system ၏ဟာ့ဒ်ဝဲကိုသိရန်ကိရိယာ ၃ ခု
inxi: သင်၏ system ၏ hardware အစိတ်အပိုင်းများကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရန် script
Shell Scripting ကိုသုံးသော Terminal မှ parameters များကိုထုတ်ယူနည်း
1 Firmware နှင့် Driver - အယူအဆများ၊ တူညီချက်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်အခြားအရာများ။
1.1 Firmware ဆိုတာဘာလဲ။
1.4 GNU / Linux ရှိ Firmwares နှင့် Drivers များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း
Firmware နှင့် Driver - အယူအဆများ၊ တူညီချက်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်အခြားအရာများ။
ဝဘ်အဆိုအရ «Definicion.de», un « Firmware » အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်:
"Firmware သည်ကုမ္ပဏီပရိုဂရမ်းမင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည်အီလက်ထရွန်းနစ်စနစ်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်ဟာ့ဒ်ဝဲ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ပရိုဂရမ်ဘာသာစကားအရတီထွင်ထားသောကြောင့်ဆော့ဝဲလ်၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်လည်းယူမှတ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ Firmware သည်ပြင်ပမှပစ္စည်းနှင့်၎င်း၏အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများမှညွှန်ကြားချက်များအကြားဆက်စပ်မှုဖြစ်သည်။" (အချက်အလက်ချဲ့ရန်)
နေစဉ်, ဝဘ် «Sistemas.com» အောက်ပါဖော်ပြသည်:
"ထို့နောက် Firmware တွင်ကွန်ပျူတာနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့်ညွှန်ကြားချက်များစွာပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတို့အား Read Only Memory (ယေဘုယျအားဖြင့် ROM Memory ကိုအသုံးပြုသည်) တွင်တွေ့နိုင်ပြီး၎င်းသည်စက်၏လျှပ်စစ်တိုက်နယ်အဆင့်တွင်လည်ပတ်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။ အဖွဲ့။" (အချက်အလက်ချဲ့ရန်)
ဝဘ်အဆိုအရ «conceptodefinicion.de», un "ယာဉ်မောင်း" အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်:
"လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်အရံပစ္စည်းထိန်းချုပ်သူနှင့် တွဲဖက်၍ အလုပ်လုပ်သောဆော့ဖ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် interface ကိုပေးသည်။ Device တစ်ခု၏ Driver (Controller / manager) သည်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော application တစ်ခုဖြစ်ပြီးအသုံးပြုသူသည်သူ၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ထည့်သွင်းထားသောပရိုဂရမ်များအားလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် hardware ကိုမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်စေရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ပစ္စည်းကိရိယာများ၏လည်ပတ်မှုကိုအလယ်အလတ်မြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသူများအတွင်းတွင်အရေးအပါဆုံးအပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူသည်။" (အချက်အလက်ချဲ့ရန်)
"Controller (သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်လို Driver နှင့်တူညီသည်) သည်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကိရိယာ၏ Hardware တွင်ပါရှိသောအရာများကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Peripheral (ဆိုလိုသည်မှာ Keyboard) ဖြစ်သည်။ ၊ ပရင်တာ (သို့) Mouse သည်၎င်းသည် Input Peripheral (သို့) Output Peripheral ဟုတ်မဟုတ်၊ သို့သော် Video Card, Sound Card သို့မဟုတ်အခြားအရာများကဲ့သို့သောတပ်ဆင်ထားသည့် System Devices များအားလုံးကိုခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲ။" (အချက်အလက်ချဲ့ရန်)
နှစ် ဦး စလုံးသည်ကိရိယာကိရိယာများကိုအသုံးပြုရန်အသုံးပြုသည့်ဆော့ဗ်ဝဲကိရိယာများသို့မဟုတ်အသုံးအဆောင်များဖြစ်သည်။
Device တစ်ခုချင်းစီတွင်၎င်းနှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မှတ်ဥာဏ်ဆိုင်ရာ module များတွင်တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သော Firmware ကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေလိမ့်မည်။ ဒရိုင်ဘာတစ်လုံးတပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းကိုစက်လည်ပတ်မည့် Hard Drive နှင့် Operating System တွင်အမြဲအလုပ်လုပ်သည်။
Firmware ဆိုသည်မှာ hardware နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သောနိမ့်ဆုံး software ကိုဆိုလိုသည်။ Driver သည်ပိုမိုမြင့်မားသောအလုပ်များကိုကိုယ်စားပြုသည်။
မှန်ကန်ပြီးကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားသော Driver သည်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်သည့်စက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်စက်တစ်ခု၏မှန်ကန်သောလည်ပတ်မှုကိုအာမခံသောကြောင့်၎င်းနှစ်ခုစလုံးသည်အလွန်အရေးကြီးပြီးလိုအပ်သည်။ firmware သည်အခြေခံနှင့်ကန ဦး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ မှန်ကန်သော start-up နှင့်အွန်လိုင်းကိုတင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကို device ကို၏။
Firmware သည်များသောအားဖြင့် update လုပ်ရန်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီး၊ Driver သည်များသောအားဖြင့်ကိုယ်တိုင်နှင့်အလိုအလျောက် install လုပ်ရန်နှင့် update လုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။
GNU / Linux ရှိ Firmwares နှင့် Drivers များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း
ထံမှသတင်းအချက်အလက်ပြီးတာနဲ့ လုပ်, မော်ဒယ်, ထုတ်လုပ်သူနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ ကိရိယာတစ်ခုပေါ်တွင်စာရွက်စာတမ်းများ၊ အပလီကေးရှင်းများသို့မဟုတ် terminal command များမှတဆင့်။ ဒါဟာသာ၏အမှု၌ပျောက်ဆုံးလိမ့်မည် "ယာဉ်မောင်း"မှန်ကန်သောယာဉ်မောင်းပါ ၀ င်သောအထုပ်ကိုသိရှိခြင်း။ ထိုလူများစွာကိုသတိပြုသင့်သည် packets တွေကို "ယာဉ်မောင်း" သူတို့ကစကားလုံးအားအမည်ဖြင့်သယ်ဆောင် « Firmware ».
ဒါ့အပြင်ဥပမာ, ၌တည်၏ GNU / Linux Distros ပေါ်အခြေခံကာ Debian / Ubuntu, မည်သည့် Package များ၌အချို့သော driver များပါဝင်သည်ကိုသင်သိနိုင်သည် အမိန့် "Apt" or "apt"အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း -
နေစဉ်, ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအဘို့ "ကုမ္ပဏီများ" အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ application ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည် "Firmware Update" သို့မဟုတ်ပဲ "LVFS"။ ဤလျှောက်လွှာကို၎င်း၏အမည်အပြည့်အစုံဖြင့်လည်းသိကြသည်။ "Linux ရောင်းချသူ Firmware ဝန်ဆောင်မှု"အခြေခံအားဖြင့်
""Linux Vendor Firmware Service" ၀ ဘ်ဆိုဒ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးအသိအမှတ်ပြုထုတ်ကုန်များအတွက်လိုအပ်သော firmware ကိုရှာဖွေ၊ ဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ မွမ်းမံနိုင်သည့်ဝန်ဆောင်မှု (daemon) မှတဆင့်အလုပ်လုပ်သော CLI နှင့် GUI ကိရိယာတစ်ခု။"
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်အတွက်၊ အဲဒါကိုငါ့အပေါ်မှာတပ်ထားတယ် operating system ခေါ်, အသုံးပြုခဲ့သည် MilagrOS (Respin သည် MX Linux ကိုအခြေခံသည်) အောက်ပါလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် command ကိုအောက်ပါ:
Star Labs PPA Repository ကိုတပ်ဆင်ခြင်း - အောက်ပါ URL ကို“ sources.list” ဖိုင်ထဲသို့ထည့်ခြင်း
ပြီးရင်အောက်ပါ command command တွေကို execute လုပ်ပါ -
“ Firmware Update” အမည်အောက်ရှိ Applications menu မှတဆင့်လျှောက်လွှာကိုဖွင့်ပါ။
၎င်း၏ graphical interface သို့မဟုတ် terminal command ဖြင့်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်၎င်းကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်သူတို့၏ဆိုဒ်များ GitHub y Launchpad.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ၏သဘောတရားများအပေါ် «Firmware y Drivers»များသောအားဖြင့်အတွင်းနှစ်ခုအရေးကြီးသောအချက်များဖြစ်သော ကွန်ပျူတာများသူတို့တိုက်ရိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးကတည်းက ချောမွေ့သောစစ်ဆင်ရေး အရာအားလုံး operating system တစ် ဦး ကျော် စက်ကို စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထား တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အကြံပြုပါသည် » Firmware and Driver Linux - ဒီသဘောတရား ၂ ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာအားလုံး
Facebook သည် Instagram အသုံးပြုသော Cinder source code ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
၎င်းတို့သည် Intel နှင့် AMD ပရိုဆက်ဆာများအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောတိုက်ခိုက်မှုအမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုကိုသူတို့တွေ့ရှိခဲ့သည်